नेपालका उत्कृष्ट गन्तब्यमा दोलखा भिमेश्वर अटाउन असफल - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
नेपालका उत्कृष्ट गन्तब्यमा दोलखा भिमेश्वर अटाउन असफल
कालिञ्चोक र शैलुङ समाबेश
सरकारले देशभर ७७ वटै जिल्लाबाट पर्यटकीय सम्भावना बोकेका १ सय नयाँ गन्तव्य छनोट गरी सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ गन्तव्यको खोजी र प्रवद्र्धन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको सरकारले यसपटक भने बजेटमै गन्तव्य खोजी गर्ने कार्यक्रम समेटेको थियो । सोहीअनुसार सम्भाव्य गन्तीय स्थलका लागि मापदण्ड बनाएर प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । प्राप्त आह्वानलाई कार्यदलले अन्तिम रूप दिएसँगै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १ सय गन्तव्य सार्वजनिक गरिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार सम्भावित गन्तव्य छनोट गर्न कार्यदल बनाउने, सोही कार्यदलले मापदण्ड बनाउने र सार्वजनिक सूचना निकालेर देशभरबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने जिम्मा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई दिइएको थियो ।
सो अनुसार दोलखा जिल्लामा रहेका धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकिय स्थलहरु कालिञ्चोक भगवति र शैलुङ जिरी पदमार्ग उत्कृष्ट गन्तब्यमा परेका छन् । तर, जिल्लाकै सबैभन्दा चर्चित धार्मिक गन्तब्य दोलखा भिमेश्वर भने १ सय पर्यटकिय गन्तब्यभित्र अटाउन सकेन । नेपालकै पहिलो मुद्रा टंकन गर्ने थलो तथा मंदिर मंदिरको प्राचिन नगरी पर्यटकिय गन्तब्यमा नअटाउदा स्थानिय बासिन्दाहरुले असन्तुष्टी ब्यक्त गर्न थालेका छन् । दोलखा घर भएका साहित्यकार भोजराज न्यौेपानेले फेशबुक स्ट्याटस मार्फत असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै सिघ्र दोलखा भिमेश्वरलाई पनि गन्तब्यको सुचिमा राख्न माग गरेका छन् ।
उनले फेशबुकमा स्ट्याटस राख्दै भनेका छन् ‘सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एकसय पर्यटकिय गन्तव्यस्थलमा दोलखाको प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दीरलाई समावेश नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बाईसे चौवीसे राज्यकै बेला ’समृद्ध राज्य ’को रुपमा रहेको दोलखा शहरमा नेपालमैं पहिलोपटक मुद्रा टंकन गर्ने टक्सार थियो । टोलभरि मन्दिरै मन्दिर छन् । दोलखाका नेवारहरुले बोल्ने छुट्टै नेवारी भाषा छ । सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रुपमा यो आफैंमा गरिमामय शहर हो । यही शहरमा नेवार समुदायको आस्थाको प्रतीक भीमेश्वर मन्दीर छ । एउटै मन्दीरमा रुद्री हुने र बली चढाईने संभवत यो पहिलो मन्दिर हो । हिन्दु मात्रै होईन बौद्वमार्गीहरुको पनि आस्थाको केन्द्र हो भीमेश्वर ! यस्तो पवित्र भूमिलाई सरकारले पर्यटकीय महत्वका रुपमा बुझ्न सकेन । यही मन्दिरको सेरोफेरोबाट देखिन्छ प्रसिद्ध गौरीशंकर हिमाल । यही हिमाल हो नेपालको समय मापनको आधार ! अब भन्नुस् मन्त्रीज्यू ! यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यस्थल होईन ?’
मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार १ सय गन्तव्य छनोट, लगानी जुटाउने र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बाँडफाँडको काम मंसिर २०७५ सम्म पूरा भइसक्नेछ । त्यसपछि छनोट भएका गन्तव्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्रवद्र्धन तथा अन्य विकासको काम सुरु हुनेछ । मन्त्रालयले नयाँ विकास गर्नुपर्ने गन्तव्यसँगै यसअघि नै स्थापित भए पनि प्रवद्र्धन तथा प्रचार–प्रसार हुन नसकेका गन्तव्यको समेत छुट्टै सूची सार्वजनिक गरेको छ । यसपटक सातवटै प्रदेशबाट नयाँ गन्तव्य समेटिएका छन् । ७५ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा गन्तव्य समेट्ने गरी १ सय गन्तव्यको सूची छानिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सन् २०२० सम्म वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित भिजिट नेपाल २०२० मनाउने घोषणा गरेको सरकारले नयाँ गन्तव्य प्रवद्र्धन गरी पर्यटनमा बहुआयामिक विकासको लक्ष्य लिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि चालू आवमा मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको यस कार्यक्रममा स्थानीय, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत आकर्षित गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।